Dowlada Federaalka | Voice Of Somalia
Tag Archives: Dowlada Federaalka
Kala Fogaanshaha Bulsho ee ay Horseedaan Hogaanada liita ee Danaysiga ku Dhisan ayaa abuura Niyad jabka Bulshada.Taasi oo keenta in Denbiyada iyo Gefafkuna Xarkaha ay goostaan.
Posted on November 24, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Waxaa la isla qiray in Xanuunada Maskaxda ee badanaya ay sabab u yihiin inta badan Maamulada Sharka ah ee dantooda danaysiga ah oo keliya ku Mashquula, kuwaas oo Daaqada ka saara Horumar kasta oo ay Higasnaayaan Bulshadu.
Nidaamayadani waxay isku maaweeliyaan faan iyo erayo uu kibir ka buuxo oo ay warbaahinta ka tebiyaan. Waxay si khladan u adeegsadaan awoodaha dawladnimo ee Bulshada ka dhexeeya iyagoon tixgelin shuruucda iyo xeerarka lagu heshiiyay.
Waxay ku cel celiyaan in dalku marayo wakhtigii ugu fiican iyagoo qiyaas ahaan ku cabira nolosha ay kooxaha maamulku ku jiraan.
“ Habartii docdeedii daruuro ku hooreen, dadka wada hel moodo, daad wararac bay tiri”.
Tani waxay caalamad iyo astaan u noqotaa hadba meesha uu ka soo if baxo hogaan ka fog ku dhaqanka cadalaadda, sinaanta iyo isbadalka lagu dhisayo nolosha basharka ee uu weheliyo khayrka iyo waanaagu. Culimada falsafadduna waxay si xeeldheer u darseen dabeecadaha dhaqan ee Bini-aadamka iyo cilmi nafsiga, taasi oo si cad loo ogaaday inay ugu horayso rajo gelinta iyo noloshiisa in wax laga bedelo qofka aadamiga ah.
Culimada muslmiintuna iyagoo ka soo dheeganaya quraanka kariimka iyo sunaha ayay cadeeyeen inay tahay waajib saaran xukuumadaha in la ilaaliyo nolosha qofka muslinka ah iyadoo taasi lagu helaayo sacaadada aduun iyo tan aakhiro.
Tiirarka Islaamka ee shanta ah, kan sekeda waxa Allah (SW) ugu talo galay 8 kooxood oo bulshada ka mid ah si loola dagaalamo fakhriga iyo kala fogaanshaha dhaqale iyo naca xiqdiga ku dhisan ee ka dhex abuurmaya kuwa ladan iyo kuwa haynta yar ee aan gacantooda waxba ku jirin.
Waa halkaasi meesha ay shuuciyadu ku jabtay ee ay sida khaldan u fahantay , iyadoo rabtay inay xalisho kala fogaanshaha dhaqaale ee bulshada si aanay u abuurmin nacayb bulsho ayay u aragtay inay wanaagsan tahay in bulshada laga simo dhinac fakhriga, halka islaamkuna ka simayo dhinaca walaaltinimada iyo koboca dhaqaale. Casrigii Amiir Cumar Binu Khadab , markii sekedii la waayay qof muslin ah oo baahan oo la siiyo taasi oo ahayd koboca dhaqaale ee bulshada oo meel sare gaaray ayuu soo jeediyay in masaajido lagu dhiso.
Halkaasi wax ka cad in Islaamku ahmiyadda koowaad siiyay basharka ee aanu siin dhismaha xataa Masaajidda iyo goobaha cibaadada iskaba dhaaf dhismayaal kale.
Waxa maamulka u wanaagsan inuu ahmiyadda siiyo hadba wixii mudan in bulshada ay noloshooda iyo dhaqaalahooda wax ka bedelayaan ee tabanaya. Waana tan aqoonyahanada maalmulku ku sheegeen (Management) baahiyaha asaasiga ah ee basharka (physiological needs). Tan ayaa keenaysa in Hogaankaasi kasbado niyadda bulshada dhamaanteed markay ogadaan sida ay u danaynayaan kor u qaadka noloshooda iyo isbedelka dhaqaale, taasi oo uu ku kasban karo ilaa kan ka soo horjeeday marka uu arko isbedelka ku yimi noloshiisa.
Haddiise hogaanku ka leexado dariiqa hogaaminta toosan una iisho ama doono kan danaysiga , wuxu noqonayaa mid Shar mooyee aan khayr u lahayn Bulshada , Nacaybka bulshaduna wuxu ku imanaya dariiqa khaldan ee uu adeegsanayo kuna dhisan keli noolaanshaha iyo danaysiga gaarka ah.
Xilkii dadnimay gabeen
Siday uga soo durkeen … (Hadraawi)
“ Hogaamiyaha wanaagasani wuxu kasbadaa niyadda cadawgiisa”
Qalinkii: Axmed Adan Cali (Haybe)
KAMIIN(DHABBA GAL) Dhagaha unbaan ka maqli jiray laakiin KM4 ayaan kula kulmay!
Posted on November 13, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Eraygan oo micnihiisu yahay (Dhabba gal) ayaa maanta kamid noqday eray bixinada dagaalka kuwooda ugu caansan ee ay war baahintu adeegsato, waxaana ugu wacan iyadoo ficil ahaan loo fuliyo had iyo goor.
Haddaad dhageysato war baahinta siiba kuwa islaamiga ah waxaad maqleysaa: Kaamiin ka dhacay Iidow Jallaad oo gaadiid looga gubay Amisom ama Kamiin loo galay madaxweynaha ama lagu dilay mas’uul hebal.
Run ahaantii dhagaha un baan ka maqli jiray wararkaas, laakin uma arag si toos ah marka laga yimaado waqtiyada qaar oo aan ka daawado filimaanta Al-kataa’ib.
Haddaba maalintii shalay oo ay taariikhdu ku beegneyd 11-11-2014 ayaa anigoo maraya isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho indhahayga ku arkay Kamiin dhacaya!!.
Goor aan iska eegayo dhinacyada si aan laamiga u gooyo ayaa waxay mar qura indhahaygu qabteen gaari aad u qurux badan oo rasaas ooda looga qaadayo.
Markiiba waxaan kamid noqday shacab badan oo cararay si aaney wax yeelo usoo gaarin, balse xoogaa kadib oo aan wax xabad ah la maqleyn kuna soo laabtay isgoyska si aan gaari uga raaco ayaan arkay baabuurkii rasaasta lagu dhoobay oo meydadka laga saarayo.
Runtii waxaan isaga tagay goobta anigoo ku wareersan cidda Kamiinkan loo dhigay, hase yeeshee habeenkii xalay ayaan maqlay afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sh/Abuu Muscab oo sheegaya in qofka KM4 lagu galay uu ahaa taliye ku xigeenkii hey’adda socdaalka kana tirsanaa Interpol.
Qaab Laga Taxadaray In Shacabku Wax Gaaraan.
Halka uu kamiinku ka dhacay ee KM4 waxay ahayd meel bulsho badan, haddana cid shacab ah wax kuma gaarin, sababtoo ah ragga hawl galka fuliyay oo ahaa kuwa aan qalqalsaneyn oo tiigsanayay hadaf u calaamadeysan.
Wey fiicneyd inaan maqaalkan ku sheego Kamiinka siduu u dhacay min bilow illaa dhamaad, laakin wadnahayga ayaan ii saamixin inaan marka hore halkeyga taagnaado oo aan dhacdada daawado.
Muhiimadda Halka Uu Kamiinku Ka Dhacay.
Kamiinku wuxuu ka dhacay isgoyska KM4 oo ah meesha ay ugu dhaqdhaqaaqa badan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ajnabiga ah, wuxuuna kamiinkan iyo kuwa lamidka ah kuu muujinayaan in uu is badan galay dagaalka magaalada Muqdisho, dhanka kalana ay amni ahaan u fashilan yihiin dowladda iyo saaxibadood.
Kamiinka Maanta Ka Dhacay Wada Jir.
Sidoo kale waxaan maanta war baahinta ka dhageystay in weerar kamiin ah lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada Hawl-wadaag Yuusuf Hilaal iyo istaafkiisa xilli ay marayeen Suuqa weyn ee degmada Wada Jir.
Tani waxay ka marqaati kacaysaa in weerarada Kamiinku usoo gudbeen magaalada Muqdisho, haddey xaaladdu sidan kusii socotana waxaa macquul ah in dowladda iyo ciidamada shisheeye aad u naafoobaan.
Kamiinada Xamar Ka Dhacaya Oo Ka Duwan Kuwa Kale.
Kamiinada ka dhacaya magaalada Muqdisho waa ay ka duwan yihiin kuwa ka dhaca meelaha ka baxsan caasimadda, waayo kuwaas waxaa loo adeegsadaa Baasuuke ama hub ka culus laakin kuwan waxaa loo isticmaalaa boobayaasha.
Hadda waxaan is weydiineynaa Axmad macquul ma tahay inaad la kulanto Kamiin Baasuuke loo adeegsanayo!!.
Axmed Warfaa Qoraa Madaxbanaan
DHAGEYSO:- Dhaqtar Soomaali ah oo Amisom ku Eedeeyay inay Faafineyso Cudurka Ebola.
Dr Xanafi Cabdi sheekh Aadan oo kamid ah dhaqaatiirta sida gaarka ah ugu taqasusay Daawada ayaa ka hadlay cudurka la dagay galbeedka Afrika.
Wuxuu soo hadal qaaday war kasoo baxay Dowladda Siiraliyoon oo ahaa in ciidamo caafimaad qaba ay usoo direyso Soomaaliya.
Wuxuu ka digay Qatarta Ciidankaasi ay la imaan karaan Soomaaliya oo aanan lahayn dowladda awood leh.
Wuxuu sheegay in Amisom ay faafinayso Cudurka Dilaaga Ebola oo dilay dad ka badan 4 kun oo qof.